DEG DEG: Kooxda Horseed oo markeedii lixaad ku guuleysatay Koobka General Daa’uud – Gool FM
(Muqdisho) 21 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa ku guuleysatay galabta koobka xiisaha badan ee General Daa’uud kaddib markii ay 3-2 ugu adkaatay naadiga Muqdisho City Club.
Kulankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan qeybtii koowad ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku horkaceyso kooxda Horseed, waxaana goolasha u dhaliyay xiddigaha kala ah Xasaasi iyo Mahad Shiine, sidaas ayaa lagu kala maray qeybtii hore dheesha oo looga gacan sarreeyey Muqdisho City Club.
Markii dib la isku soo laabtay qeybtii dambe ee ciyaarta wiilasha Muqdisho City Club ayaa dardar xooggan ku soo galay garoonka iyagoo rabay inay iska soo gudaan goolasha lagu lahaa, waxayna heleen mid ka mid ah goolasha lagu lahaa waxaan u dhaliyay ciyaarahankeeda Feysal Hazard, kulanka ayuu ka dhigay 2-1 ay Horseed ku horkaceyso.
Yeelkeede, Wiilasha Macallin Cabdi Joon ayaa bilaabay inay kubadda si ay raban u maamulan taas oo keentay in goolkii saddexaad ay la yimaadan, waxaana u dhaliyay Xasaasi, kaas oo galabta labo jeer shaqada gaaray, kulanka ayuu ka dhigay 3-1 oo Horseed ku hoggaaminaysay.
Ciyaarta oo dhammaad ah kooxda Muqdisho City Club ayaa la timid goolkii labaad ee kulanka waxaa u dhaliyay Feysan Xasan Xaashi, ciyaarta ayaa noqotay 3-2 ay ku adkaatay Horseed.
Naadiga Horseed ayaa iska dhaqday ceebtii sanadkii hore ka soo gaartay kooxda Moqdisho City Club xilli Macallin Cabdi Joon uu hal sano kaddib uu markale ku guuleystay koobka General Daa’uud.
Kooxda Horseed ayaa ku guuleysatay markeedii lixaad Koobka General Daa’uud, iyadoo kala qaaday sanadihiisa 1972, 1976, 1981, 1986, 2015 iyo 2019.